ဆောင်းရာသီ ဆောင်းပါးအရေအတွက်| WeXpats Guide
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသောရေပူစမ်းသုံးခုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သောခုစဆု(Kusatsu) ရေပူစမ်း( Kusatsu, one of Japan's three famous springs)
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အကျော်ကြားဆုံး ရေပူစမ်းအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်Kusatsu Onsen၊ Arima Onsen နှင့် Gero Onsen ဆိုပြီး အဓိကနာမည်ကြီး ရေပူစမ်းများရှိပါတယ်။ဂျပန်မှာရှိတ...
ခရီးသွား ရေပူစမ်း၊ အများသုံးရေချိုးခန်း ဆောင်းရာသီ
ဂျပန်ရဲ့ကံညံ့တဲ့နှစ်Yakutoshiဆိုတာဘာလဲ။Yakutoshiမှာဘာလုပ်ရမလဲ။ယကြာချေပုံများ （ What isabad year? What to do in bad year? And exorcism）
ကံညံ့တဲ့နှစ်မို့လို့ အိမ်အနီးနားမှာ မကောင်းမှုတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ အကြံပြုထားတဲ့ နတ်ကွန်းတွေ၊ ဘုရားကျောင်းတွေ မရှိဘူးလား" လို့ ဂျပန်မှာလူတွေပြောကြတာကို ကြားနေရပေမယ့် ပထမဆုံးကံညံ့တဲ့နှစ်ဆိုတာဘာလဲ။ ဘ...
ယဥ်ကျေးမှု ဘုရားကျောင်းနှင့်နတ်ကွန်းများ ဆောင်းရာသီ
ဒီဇင်ဘာလရာသီပွဲတော်(December seasonal event)
ဒီဇင်ဘာသည် တစ်နှစ်တာ၏နောက်ဆုံးလဖြစ်သည်။ လူတော်တော်များများဟာ နှစ်သစ်ကူးအတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေကြပြီး နှစ်ကုန်မှာ ပြီးစီးအောင်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ကြပါတယ်။ အလုပ်များလွန်းတာကို သတိပြု...
ယဥ်ကျေးမှု ပွဲတော်၊အခမ်းအနား ဆောင်းရာသီ
အခြား စားစရာ၊သောက်စရာ ဆောင်းရာသီ သဘာဝ၊အပြင်ထွက်ခြင်း
ခရီးသွား သဘာဝ၊အပြင်ထွက်ခြင်း ဆောင်းရာသီ
ဂျပန်ရဲ့ရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟုသုတ(Japanese season, spring, summer, autumn, winter)
အခြား နွေဦးရာသီ နွေရာသီ ဆောင်းဦးရာသီ ဆောင်းရာသီ
ဂျပန်ဆောင်းရာသီမှာပြုလုပ်လေ့ရှိကြသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများ(Ski, Snowboard, Oji Fox Parade, Illuminations, Japanese winter event)
Sapporo Snow Festival (Sapporo Yuki Matsuri) သည်ဖေဖော်ဝါရီလတိုင်း Sapporo ရှိ Hokkaido မြို့တော်တွင်ကျင်းပသည်။ ဤသည်မှာဂျပန်နိုင်ငံ၏လူကြိုက်အများဆုံးဆောင်းရာသီဖြစ်သည်။Sapporo Snow Festival ကို ၁၉၅၀ တွင...
ခရီးသွား ဆောင်းရာသီ ပွဲတော်၊အခမ်းအနား ဟော့ကိုင်းဒိုး